Hard Disk ကိုကိုယ်တိုင် Partation ခွဲကြရအောင် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Harddisk Repair and Maintain , Internet Tools » Hard Disk ကိုကိုယ်တိုင် Partation ခွဲကြရအောင်
By နေမင်းမောင်6:30 AM4 comments
ကျွန်တော် ဆရာတော် အရှင်အိန္ဓက မေးထားတာလေး ရှိတာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ .. ကျွန်တော် အရင်ကလည်း EASEUS.Partition.Master.v7.1.1 ကိုအသုံးပြုပြီး Partation ခွဲနည်းကို ဗီဒီယို ဖိုင်လေးတွေနဲ့ တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် .. အခုတော့ ကျွန်တော် HarDisk တစ်လုံးကို Partation ဘယ်လိုခွဲ လို့ရမလည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ဆိုရင် အဆင်ပြေမလည်း Hard Disk တစ်လုံးကို Format ပြန်ချပြီး Partation အသစ်ဘယ်လို ပြန်ခွဲမလည်း ဆိုတာကို ကျွန်တော် ရေးပေးသွားပါမယ် .. ကျွန်တော် အခုရေးပေး သွားမယ့် နည်းလမ်းလေးကတော့ လက်ရှိ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်ကတော့ Hard Disk တစ်လုံးကို Partation ခွဲချင်တဲ့ အခါမှာ EASEUS.Partition.Master.v7.1.1 ကိုအသုံးပြု ပါတယ် .. ဒီကောင်လေး ကိုကျွန်တော် ဘာကြောင့် အသုံးပြုရတာလည်း ဆိုတော့ အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေသလို မိမိတို့ ခွဲချင်တဲ့ ပမာဏကို စိတ်ကြိုက် တွက်ချက်ပြီး ခွဲပေးနိုင်တာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ် .. ပြီးရင် အသုံးပြု ရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ် ..
အရင်ဆုံး Hard Disk တစ်လုံးကို Partation ခွဲတာကို မဖော်ပြခင် မိမိတို့က လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Hard Disk ကြီးတစ်ခု လုံးကို Format ချပြီး Partation အသစ်ကနေ ပြန်ပြီးတော့ ခွဲချင်သူတွေ အတွက် Windows Installation လုပ်ရင်းနဲ့ Hard Disk တစ်ခုလုံးကို Format ဘယ်လို ချရမယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးထားတဲ့ Video File လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ကျွန်တော် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Video File လေးကို သေချာကြည့် လိုက်တာနဲ့ Hard Disk အဟောင်း တစ်လုံးကို Partation အသစ်ပြန်ခွဲ ချင်တဲ့ အခါမှာ ဘယ်လို Format ချမလည်း .. နောက်တစ်ချက်က Hard Disk အသစ်တစ်လုံးကို Windows တင်တဲ့ အခါမှာ မူရင်း Hard Disk ကနေပြီးတော့ Partation အသစ် တစ်ခု ဖန်တီးပြီး Windows Installtaion ဘယ်လို လုပ်ဆောင် ရမလည်း ဆိုတာကို သဘောပေါက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. U-Tube ကနေ ကြည့်လို့ အဆင်မပြေ သူတွေ ကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
အပေါ်က Video File လေးကို ကြည့်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Partation ဘယ်လို ခွဲမလည်း ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ဆက်ပြီး သွားကြရအောင် ဗျာ .. ကျွန်တော် အခု ရေးပေးမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ Windows အတွင်းမှ Partation ခွဲခြင်းလို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ် .. ဒါတွေကို မပြောခင် သိထားသင့် တာလေးတွေကို အရင် ရှင်းပြပေး သွားပါမယ် .. Hard Disk တစ်လုံးကို Partation ခွဲပြီ ဆိုရင် အားလုံးပဲ သတိထား ကြည့်ကြည့် လိုက်ပါ .. အရင်ဆုံး File System ကို သတ်မှတ် ပေးတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ NTFS အမျိုးအစား ကိုသာ ရွေးချယ် ကြတော့ပါတယ် .. NTFS ကို ရွေးချယ် ကြသလို ဘာကြောင့် NTFS ကိုရွေးချယ် ကြတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိထားဖို့ လိုပါတယ် ..
အရင်တုန်းက Hard Disk တွေကို Partation ခွဲတဲ့ အခါမှာ FAT File System ကို အသုံးပြုကြပါတယ် .. FAT File System တုန်းက ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Hard Disk ရဲ့ FAT File System ထဲမှာ အစုလေး တွေခွဲထား ပါမယ် ..အဲ့ဒီ အစုလေး တစ်စုရဲ့ Data တွေ သိမ်းဆည်း နိုင်တဲ့ ပမာဏကို 32 KB သတ်မှတ်ထားပါတယ် .. ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ အဲ့ဒီ အစုကလေးတစ်ခုမှာ အချက်အလက် တစ်ခုကို သိမ်းတော့ မယ်ဆိုရင် အစုတစ်ခုကို Freespace က 12 KB ယူပါတယ် .. အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ သိမ်းလာတာ များလာပြီ ဆိုတာနဲ့ Freespace ကလည်း များလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါက FAT File System တုန်းကပါ ..
အခုနောက်ပိုင်း NTFS File System မှာကျတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ စောစောက အစုကလေး တစ်စုမှာ အချက်အလက် တွေကို သိမ်းတဲ့အခါ ပေးလိုက်ရတဲ့ Free Space 12 KB နေရာမှာ4KB အထိ ချုံလိုက်တာ ဖြစ်တာအတွက် အချက်အလက်တွေ သိမ်းတဲ့အခါမှာ အရင် FAT File System တုန်းက ထက်စာရင် NTFS မှာ Free Space နည်း သွားတဲ့အတွက် သိမ်းဆည်းဖို့ Space ပိုများလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Hard Disk တစ်လုံးကို Partation ခွဲတော့မယ် ဆိုရင် File System မှာ NTFS ကို အသုံးပြု ကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ် ..
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Primary နဲ့ extended သတ်မှတ် ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. extended ကို Secondary Partation လို့လည်း ခေါ်ပါတယ် .. Primary Partation ကိုထားမယ် ဆိုရင် Hard Disk တစ်လုံးမှာ အများဆုံး Partation လေးပိုင်း အထိပဲ ထားလို့ ရတယ်ဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ် .. အများ အားဖြင့်တော့ Primary Partation ကို C တစ်ခုကို သားထားပြီး ကျန်တဲ့ Partation တွေကို ( Ectended ) Logical Partation ကိုသာ ထားကြပါတယ် .. Logical Partation ကတော့ အပိုင်း ( 24 ) ပိုင်းအထိ ထားလို့ ရပါတယ် .. ဒါပေမယ့် A နဲ့ B တော့ မပါပါဘူး ။။ A နဲ့ B က Floppy Drive အတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Primary Partation အကြောင်းကို အနည်းငယ် ပြောပြချင် ပါတယ် .. Primary Partation ဆိုတာ Windows တင်တဲ့ အခါမှာ Primary Partation မှာသာ Boot လုပ်ပေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Windows Installation တွေ ပြုလုပ် တော့မယ်ဆိုရင် Primary ဖြစ် သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ Partation ပေါ်မှာသာ ပြုလုပ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. နောက်တစ်ချက် လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Hard Disk ဟာ Badsector တွေများ ပြီး ပျက်စီးဖို့ များနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Hard Disk ကြီးတစ်ခုလုံးကို Format ရိုက်ပြီး Partation တွေကို Primary ထားပြီး အသုံးပြု ခြင်းကလည်း Hard Disk ဆက်လက် အသုံးပြု နိုင်ဖို့ အတွက် အချိန် ဆွဲဆန့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီနေရာမှာ Primary Partation ကို4ပိုင်းသာ ထားနိုင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အားလုံး သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..
ကဲဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့ အနေနဲ့ Hard Disk တစ်လုံးကို Partation ခွဲတော့မယ် ဆိုရင် ဘာတွေကို ဘယ်လို သတ်မှတ် ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကို သိသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ် .. ဆက်ပြီးတော့ EASEUS.Partition.Master.v7.1.1 ကို အသုံးပြုပြီး Partation ဘယ်လို ခွဲရမယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် အောက်မှာ Video File လေးတွေ တင်ပေးထားပါတယ် .. ဒီ Video File လေးတွေကို သေချာကြည့်လိုက်တာနဲ့ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပြေ နဲ့ လုပ်ဆောင် တက်သွားပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော် နည်းနှစ်နည်း တင်ပေးထားပါတယ် .. ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ Partation တွေကို ပိုင်းတဲ့အခါမှာ MB နဲ့သာ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ 1 GB မှာ 1024 MB ရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် .. ဒါမှသာ တွက်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်. .. EASEUS.Partition.Master.v7.1.1 ကိုတော့ အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် ..
.ရှိပြီးသား Partation များထဲမှအသစ်ထပ်ခွဲခြင်း
Khin Sandar October 31, 2011 at 3:25 PM
White Dream November 1, 2011 at 3:11 PM
Software တွေက freeware မဟုတ်ခဲ့ရင် ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ ၀ိနည်းစည်းကမ်းပိုင်းကနေ ကြည့်ရင် လွတ်မလွတ်ဆိုတာ အငြင်းပွား စရာကြီးပါ။
မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတော့ Free ware မဟုတ်ခဲ့ရင် ဦးဇင်းတို့တော့ မသုံးဖြစ်အောင်ပဲ ရှောင်နေလိုက်တယ်။
ဦးဇင်းပါတေးရှင်းခွဲတုံးကတော့ Ubuntu Linux ကို သွင်းချင်ယောင် ဆောင်လိုက်တယ်။ ပါတေးရှင်းခွဲပြီးသည် အထိပေါ့။ ပြီးပြီဆိုတော့မှ အိယောင်ဝါးလုပ်ပြီး ထွက်ပစ်လိုက်တယ်။
phone win December 3, 2011 at 7:15 AM
win December 19, 2011 at 10:44 PM
မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် အစ်ကိုနေမင်းရေးတဲ့ပို့စ်တွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါ pdf နဲ့ သိမ်းထားချင်လို့ပါ
ဘယ်လိုသိမ်းရလဲ ဆိုတာလေး ထပ်ရှဲယ်စေလိုပါတယ်